Hadda waxaad la wadaagi kartaa qoyskaaga Apple Card: Apple Card Family | Waxaan ka socdaa mac
Hadda waxaad la wadaagi kartaa qoyskaaga Apple Card: Apple Card Family
Adeeggii ugu horreeyay ee uu soo bandhigo Tim Cook maanta munaasabadda gu'ga ee bisha Abriil 20: Qoyska Kaarka Apple. Iyadoo la raacayo fikradda ah in qoysasku ay leeyihiin waaritaan dhaqaale iyo iyada iyo xulafada Goldman Sachs, dalabkan maaliyadeed ee cusub ayaa la bilaabay oo hubaal ka farxin doona adeegsadayaasha.
Apple ayaa maanta soo bandhigtay muuqaal cusub oo loogu magac daray "Apple Card Family" munaasabaddeeda gaarka ah ee loo yaqaan 'Spring Loaded', taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala wadaag isla Apple Card xubnaha kale ee qoyska adoo adeegsanaya iCloud.
Mulkiilaha kaarka Apple wuxuu ku martiqaadi karaa dadka kale inay la wadaagaan kaarkooda oo ay la socdaan kharashyada qof walba ku jira barnaamijka 'Wallet'. Waxa kale oo aad xad u goyn kartaa kharashka isticmaale kasta oo qoyska ka mid ah aad tahay 13 sano ama ka weyn, Waxaana jiri doona ikhtiyaarro u heellan waalidiinta si ay u xakameeyaan kharashka carruurtooda. Xakamaynta waalidka ee imaan doonta, dabcan.
Isticmaalayaasha Kaarka Apple way awoodi doonaan kala dooro laba nooc oo wax wadaag ah. Iyada oo "U oggolow qarashka kaliya", isticmaaleyaasha la casuumay ma heli doonaan isu-dheelitirnaan guud, dejin iyo taariikhda macaamil ganacsi. Si aad ugu suurtagasho astaamahan xubnaha la casuumay, milkiilaha kaarka waa inuu doortaa ikhtiyaarka ah "Noqo la-wadaagayaal."
Fikraddan waxaa loogu talagalay in dib loogu cusbooneysiiyo sida lammaanaha is qaba, lamaanayaasha iyo dadka aad ugu kalsoon tahay, wadaagaan kaararka deynta isla markaana si wadajir ah u abuurtaan amaah. Dariiq loo helo dhaqaale caafimaad qaba oo ka baxsan nafteenna.
Jennifer Bailey, ku xigeenka Apple ee Apple Pay, ayaa faallo ka bixisay “Qoyska Apple Card wuxuu awood u siiyaa dadka inay wax dhisaan taariikhdaada amaahda si isku mid ah
Waxaan horeyba u ognahay in gudaha Mareykanka ay waxyar ka yara duwan yihiin Spain ama Yurub. Marka xilligan shaqadan, si macquul ah Waxaa lagu bixin doonaa oo keliya waddanka Mareykanka. Waqtigaan la joogo ma hayno Kaarka Apple-ka waxaanan u maleyneynaa inay qaadaneyso waqti in la yimaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Hadda waxaad la wadaagi kartaa qoyskaaga Apple Card: Apple Card Family
Midab casaan ah iPhone 12 oo horay loo sii iibiyay Jimcaha